विजनेश – Page5– सप्तरंगी एफ एम
Home / विजनेश (page 5)
सप्तरंगी एफएम / डिकेश लामा / २१ कार्तिक २०७५ झापा÷स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादन बढे पछि भारतबाट फूल ल्याएर व्यवसाय गर्नेहरु घाटामा परेका छन् । झापाका ठूला फूल व्यवसायीहरुले यस बर्षको तिहारमा घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । आन्तरिक उत्पादनको बृद्धि र तिहार ढिलो भएको कारण व्यवसायीहरुले घाटा व्यहोर्नु परेको हो । बजारमा फूल अत्याधिक निस्किए पछि फूलको मुल्य तल झरेको ...
चाडवार्ड नसकिंदै किसानहरुलाई धान काट्ने चटारो , जनशक्ति अभाव हुँदा पाकेको धान भित्र्याउन कठिनाई
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/कात्तिक १४/ चाडबाड सक्किन नपाउदै किसानहरुलाई धान काट्न चटारो परेको छ । नेपालीहरुको महान चाड दशैँ सकिए लगत्तै तिहारको मुखमा धान पाक्नाले किसानहरुलाई धान थन्क्याउने चटारो परेको हो । किसानहरुले असार महिनामा दुःख गरेर लगाएको धानबाली थन्क्याउने बेलामा चाडबाड मान्नुपर्ने र धान काट्ने जनसक्ति नहुँदा समस्या थपिएको हो । पछिल्लो समय परम्परागत प्रबिधीलाई विस्थापन गर्दै नेपाली कृषकहरु अत्याधुनिक ...
धानबालीमा रोग लागेपछि गौरादहका किशान चिन्तित
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक / कात्तिक १२ , २०७५ धानमा रोग लागेर उत्पादन नहुने भएपछि झापाको गौरादह नगर क्षेत्रका धेरै किसानहरु यस बर्ष निराश बनेका छन् । देशभर धान राम्रो फलेको खवर आईरहेका वेला गौरादह नगरपालिका क्षेत्रका किसानहरु भने निराश बनेका हुन् । गौरादहका विभिन्न क्षेत्रमा करिव २ सय विगाह भन्दा धेरै भागमा सरकारले सुचिकृत नगरेको रन्जित र सर्ना धान बोट ...
अमेरीकाको मिनिसोटामा ६ जना भुटानी–नेपाली मुलका युवाद्वारा ग्रोसरी एण्ड किचन सञ्चालन
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक कात्तिक ९अमेरीकाको मिनिसोटामा ६ जना नेपाली मुलका युवाले संयुक्त व्यवसाय सुरु गरेका छन् । पुर्वि नेपालका भुटानी शरणार्थि शिबिरमा लामो समय बिताएर तेस्रो देश पुनर्वासको क्रममा अमेरीका पुगेका ६ जना युवाले ग्रोसरी एण्ड नेपाली किचनको स्थापना गरेका हुन । ग्रोसरी र किचनका सम्पुर्ण समानहरु सुपथ मुल्यमा बिक्रि गर्ने गरी व्यवसाय सुरु गरेको गरेको सञ्चालक तिलक पक्वालले जानकारी ...